Nandamoka. Io no azo ilazana ny vokatr’ilay fikasana hanao hetsika famoriam-bahoaka nokarakarain’ireo Mpanohitra tetsy Analakely, ny sabotsy 20 febroary lasa teo. 22 février 2021
Fahafaham-baraka no nobabena, zara raha nisy tonga namaly ny antso ireo mpomba azy ireo. Nahomby ihany koa ny fepetra izay napetraky ny mpitandro filaminana.
Lasan-ko vavany fotsiny sisa ireo olon-dRavalomanana fa tsy sahy midina an-kianja tena sahy miatrika izay fifandonana mety hitranga. Any amin’ireo haino aman-jery isan-tokony ireo Solombavambahoaka avy amin’ny Tim no manao belazao fa tsy tazana teny Analakely akory, ny sabotsy tontolon’ny andro.